2004 – Year – Channel Myanmar
IMDB: 6.5/10 350,938 votes
Shrek2(2004) Shrek, Fiona and Donkey set off to Far, Far Away to meet Fiona's mother and father. But not everyone is happy. Shrek and the King find it hard to get along, and there's tension in the marriage. The fairy godmother discovers that Shrek has married Fiona instead of her Son Prince Charming and sets about destroying their marriage. (ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ Zaya Phyoe ပါ) File Size : ...
IMDB: 7.2/10 357,425 votes
House of Flying Daggers (2004) (Zawgyi) ရယူခြင်းဟာ အချစ်တဲ့လား ပေးဆပ်ခြင်းဟာအချစ်ပဲလား တချို့လူတွေဟာ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားတာကို အချစ်လို့သမုတ်ကြပေမယ့် တချို့တွေကတော့ ထိုအချိန်မှာချစ်သူကိုစွန့်လွတ်ရင်း ပေးဆပ်ရင်း ချစ်နေတာကို အချစ်စစ်လို့ခေါ်ကြပြန်တယ် စသည်ဖြင့် သို့လော သို့လောတွေနဲ့ အချစ်အကြောင်းကို မသိခင် ငယ်စဉ်အခါက တီဗီရှေ့မှာဖီးလ်ခဲ့ရဖူးတဲ့ အချစ်ကားတွေထဲမှာ ဒီဇာတ်ကားလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနည်းငယ်ပြောရရင် တရုတ်ပြည် အေဒီ၅၈၉မှာ အင်အားကြီးတန်မင်းဆက်ဟာ အားလျော့ခဲ့လာပြီး တိုင်းပြည်ကို မနိုင်မနင်း အုပ်ချုပ်နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ် သူပုန်အဖွဲ့တွေ အများအပြားသောင်းကျန်းနေချိန်မှာ အင်းအားအကြီးဆုံးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကတော့ ဓားပျံတို့ရဲ့ဂေဟာ လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် မြို့တွင်းပျော်ပွဲစားရုံတစ်ခုမှ မျက်မမြင်ကချေသည်မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ သူပုန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလို့ သံသယ ရှိခြင်းခံရပြီး အစိုးရဋ္ဌာနမှုးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့လီယိုနဲ့ဂျင်ဟာ ထိုမိန်းကလေးနောက်ကို လိုက်ရင်း သူပုန်အဖွဲ့ရဲ့ နေရာကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် မိန်းကလေးကိုအယုံသွင်းကာ သူ့မူလနေရာကိုပြန်ပို့ပေးရင်း နေရာကိုဖော်ထုတ်ရမယ့်တာဝန်ကိုယူတဲ့ဂျင်ဟာ ရဲမက်တွေရန်မှကာကွယ်ရင်း ထိုမိန်းကလေးအပေါ်ချစ်မိသွားကာ ဇာတ်လမ်းရဲ့အရှိန်ကိုပိုမြင့်လာစေခဲ့ပါတယ်... အချစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ချစ်နေဖို့လိုအပ်သလို တခါတလေကျတော့လည်း အချစ်ကြောင့်ပဲ ကိုယ့်ဘ၀တစ်ခုလုံးရင်းရဲတဲ့သတ္တိတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်... သိုင်းကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပေမယ့် အမိုက်စား ဇာတ်လမ်းအစကနေအဆုံးထိအားလုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှု့တွေကို အဆုံးထိဆွဲခေါ်သွားမယ့်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်... Imdb 7.6နဲ့RT မှာတော့88%ရရှိထားပြီး နာမည်ကျော်Heroဇာတ်ကား Great ...
IMDB: 7.6/10 99,302 votes
Walking Tall (2004) အကျ​ရှငျ​ကားကွိုကျ​တဲ့ပရိသတျ​​တှအေတှကျ​ ဇာနျ​ကား​ကောငျး​လေးတဈ​ကားတငျ​​ပေးလိုကျ​ပါတယျ​Walking Tall ရုပျ​ရှငျ​ဇာတျ​ကားဟာ ၂၀၀၄ခုနှဈ​ထှကျ​ အကျ​ရှငျ​ဇာတျ​ကားတဈ​ကားဖွဈ​ပွီး Imdb rating 6.2/10 ရရှိထားပါတယျ​ပါဝငျ​သရုပျ​​ဆောငျ​ထားသူ​တှကေ​တော့ အကျ​ရှငျ​မငျးသားကွီးDwayne Johnson,မငျးသမီး​ခြော Ashley Scott,မငျးသား Johnny Knoxville စတဲ့သူ​တှဖွေဈ​ပါတယျ​ဇာတျ​လမျးအကဉျြးက​တော့ ဂုဏျ​ထူး​ဆောငျ​စဈ​သားဖွဈ​ဖူးတဲ့ Chris Vaughn တဈ​​ယောကျ​ ရာထူးက​နအေနားယူပွီး ​မှေးရပျ​​မွမွေို့​လေးမှာ ပွနျ​အ​ခွခြေ​နထေိုငျ​ခဲ့ပါတယျ​။သူပွနျ​လာတဲ့အခါ တဈ​မွို့လုံးမှာအကွီးဆုံးစီးပှား​ရေးက အရငျ​​ကြောငျး​နဖေကျ​​တှဖွေဈ​ခဲ့ဖူးတဲ့Jay Hamilton နဲ့ Ray Templeton တို့ဦးစီးလုပျ​ကိုငျ​​နတေဲ့ ကာစီနို​လောငျးကစားဝိုငျးကွီးဖွဈ​​နခေဲ့ပါတယျ​။တဈ​မွို့လုံးမှာ ​လောငျးကစား အရကျ​ ​ဆေး စသညျ​ဖွငျ့​မ​ကောငျးမှုမြိုးစုံနဲ့ပွညျ့​​နတောကိုမွငျ​​နရေတဲ့အခါ Chris တဈ​​ယောကျ​ ရဲ​တှကေိုယျ​စား သူ့လကျ​နဲ့​ဖွရှေငျးပါ​တော့တယျ​။သူတဈ​ကယျ​ပဲ​ဖွရှေငျးနိုငျ​ပွီး အရငျ​ကလို​ကောငျးမှနျ​တဲ့မွို့​လေးပွနျ​ဖွဈ​​အောငျ​လုပျ​နိုငျ​မှာလား....ဘယျ​လို ပွဿနာ​တှကွေုံ​တှရေ့မှာလဲဆိုတာ စှနျ့​စားခနျးအပွညျ့​နဲ့ရိုကျ​ကူးထားတာမို့ အကျ​ရှငျ​ကားခဈြ​ပရိတျ​သတျ​​တှကွေညျ့​ရှု့အား​ပေးလိုကျ​ပါဦး File Size : (750 MB) and (310 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 26min Format : Mp4 Genre : Action, ...
IMDB: 6.2/10 58,816 votes
The Incredibles (2004) The Incredibles (2004) IMDb - 8.0/10_____Rotten - 97% Won2Oscars. Another 65 wins & 56 nominations. Pixar ရဲ့ Inside Out ကို Review မတငျခငျမှာ သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးတှထေဲက တဈကားဖွဈတဲ့ The Incredibles အကွောငျးကို ပွောရငျး Pixer အကွောငျးကိုနညျးနညျးမိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ Pixar ကုမ်ပဏီ က ကာတှနျးကားတှေ ထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီကွီး တဈခု (Animation Giant) ဖွဈပွီး Dreamwork တို့ Disney တို့လို ထုတျလုပျရေးကုမ်ပဏီကွီးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ၁၉၇၉ ခုနှဈမှာ Lucasfilm ကုမ်ပဏီရဲ့ (Star Wars, Indiana Jones တို့ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ studio ဖွဈပါတယျ။) animation department အဖွဈ စတငျခဲ့ပွီး ၁၉၈၆ ...
IMDB: 8.0/10 638,188 votes
Downfall (2004) IMDb (8.2)...Rotten Tomatoes (91%)...Metacritic (82%)Unicodeဟဈတလာ ကဆြုံးခနျး!!!၁၉၄၅ ခုနှဈတှငျ ဂြာမနီ ဟာဆိုရငျ အနောကျဖကျနှငျ့ တောငျဖကျတှငျ ပိတျမိပွီး ဆိုဗီယကျစဈတပျတှကေို ရှုံးနိမျ့လုအခွနေကေိုရောကျခဲ့တယျ။ဘာလငျက Third Reich မွို့တျောမှာ ဆိုရငျ Adolf Hitler က ဂြာမနီက အောငျမွငျမှုကို ရရှိနိုငျခွရှေိပွီး သူရဲ့အကွံပေးတှနေဲ့ ဗိုလျခြုပျတှကေို နောကျဆုံးလူကို တိုကျခိုကျရနျအမိနျ့ပေးခဲ့တယျ။" Downfall"မှာ တော့ Reich ရဲ့ နောကျဆုံးနတှေ့မှော အကွီးပိုငျးဂြာမာနျခေါငျေးဆာငျတှကေ သူတို့ရဲ့ ခဈြခငျရသူမှ သစ်စာဖောကျခွငျးစတငျခံရခွငျး၊ မိမိတို့အသကျကယျတငျရနျ ကွိုးပမျးခဲ့ပုံ၊ အခြို့သောသူမြားက Hitler နှငျ့အတူအသခေံရနျရှိကွောငျးတို့ကို ပွသခဲ့တယျ။Hitler ကိုယျတိုငျ စိတျထောငျးကိုယျကွဖွေဈပွီးတော့ သံသယတှမြေားလာ.. အကောငျးမွငျတတျတဲ့စိတျထားရှိသူကနေ သတျသဖေို့ရနျအထိ စိတျဓါတျကလြာတဲ့အခါမှာတော့.......။ဒီဇာတျကားဟာ ဟဈတလာရဲ့နောကျဆုံးနရေ့ကျမြားကို ခံစားရမယျ့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဇာတျကားတှထေဲက တဈကားဖွဈပါတယျ။Director: Oliver Hirschbiegel Main actors: Bruno Ganz, Alexandra Maria ...
Secret Window (2004) Secret Window (2004) IMDb - 6.6/10_____Rotten - 46% တခြို့ဇာတျလမျးတှကေ ဇာတျလမျးအကဉျြးခြုပျရေးလိုကျရငျ မကွညျ့ရသေးတဲ့လူတှအေတှကျ အရသာပကျြသှားတာမြိုးဖွဈသှားတတျတဲ့အတှကျ ဒီဇာတျလမျးကိုတော့ နညျးနညျးလောကျပဲပွောပွထားခငျြပါတယျ…ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇာတျလမျးကအရမျးကောငျးနလေို့ပါ..ဇာတျလမျက အေးပါတယျ ..ဒုနျးဒုနျး ဒိုငျးဒိုငျးတှမေပါပါဘူး.အေးပါတယျဒါပမေယျ့ ပငျြးစရာမကောငျးပါဘူး…မငျးသားကွီး Johnny Depp ရဲ့ထုံးစံအတိုငျး စိတျဝငျစားစရာတှအေပွညျ့နဲ့ သသေခြောခြာအာရုံစိုကျကွညျ့ရှုပါမှ ဇာတျရညျလညျမယျ့ ဇာတျလမျးမြိုးပါ..ဒီဇာတျလမျးက ဘာဖွဈပါသညျခငျဗြာ..ဆိုတာမြိုး ပွောမပွခငျြတော့ပါဘူး သညျးထိတျရငျဖို လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျအမြိုးအစားလို့ပဲပွောပါရစေ..။စဉျးစားတှေးချေါခငျြသူတှအေတှကျတော့ ဇာတျလမျးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ..။အရုပျဆိုးတဲ့အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျမှုကွောငျ့ စာရေးဆရာဟာ သူ့မိနျးမကို နယူးယောကျမွို့ကသူပိုငျတဲ့အိမျမှာထားခဲ့ပွီး သူကတော့ တောအိမျကလေးမှာ တဈယောကျတညျး အထီးကနျြစှာနရေငျး စာရေးနခေဲ့ပါတယျ။ဒီလိုနဲ့နလောတာ ခွောကျလလောကျကွာလာတော့ အိမျတံခါးကိုလူတဈယောကျလာခေါကျပွီး အဲ့ဒီလူက စာရေးဆရာကို သူ့စာတဈပုဒျကို ပုံတူကူး ခိုးယူရေးသားခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲပါတော့တယျ..။စာရေးဆရာက ငွငျးဆိုတဲ့အခါ အဲ့ဒီညမှာ စာရေးဆရာရဲ့ခှေးကိုသတျသှားပွီးနောကျ နောကျထပျခွိမျးခွောကျမှုတှနေဲ့အတူ..နောကျထပျလူသတျမှုတှေ…?????2004 မတျမှာ ထှကျခဲ့တာဖွဈပွီး Rating တှကေ IMDb- 6.6/10 Roger Ebert – ¾ rotten ...
IMDB: 6.6/10 179,258 votes
The Terminal (2004) မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးကတော့ တကယ့်ဂရိတ်ကြီးတွေပါ။ တွမ်ဟန့်နဲ့ ကက်သရင်းဇီတာဂျုံးတို့ပေါ့။ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကတော့ အမေရိကားကိုတစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့ခရာကိုရှားဆိုတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးက ခရီးသည်တစ်ယောက် အမေရိကားကို ရောက်လာတဲ့အခါ ဘာသာစကားက မကျွမ်းကျင်၊ တိုင်ပင်အကူအညီတောင်းရမယ့်သူက မရှိ၊ အမေရိကရဲ့အထာတွေကိုလည်း နားမလည်၊ သည်လိုနဲ့ လေဆိပ်မှာတင် ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ဟာသနှော၊ အသောခပ်များများနဲ့ ၀မ်းနည်းစရာလေးတွေလဲ ဖြစ်ပျက်၊ ချစ်ခြင်းတရားအကြောင်းလည်း ရောစွက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါပဲ။ ဒါကတော့ ဇာတ်ကြောင်းပါ…ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးစဉ်းစားမိနေပါတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Tom Hanks ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေကောင်းလို့ ဟာသဇာတ်ကားလို့ယေဘုယျထင်ရပေမယ့် အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ ရသတွေ..အမြင်တွေ..ရှိနေတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ လေဆိပ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေလို့စဉ်းစားလိုက်လို့ရပါတယ်… တိုက်ခိုက်မှုတွေ..နားမလည်မှုတွေ…ချောက်တွန်းချင်တဲ့သူတွေ…ကူညီချင်တဲ့လူတွေ…အမုန်းတွေ.. မေတ္တာတွေ…တာဝန်တွေ..ကံကြမ္မာဆိုးတွေ…သူငယ်ချင်းတွေ…ကြည့်မရသူတွေ… ဒီလိုမျိုးတွေထဲမှာ Tom Hanks တစ်ယောက် ပျော်ရွှင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်..ရုန်းကန်တယ်။ ရည်မှန်းချက်ကိုမဆုတ်မနှစ် သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာ ဘာကြောင့်မှနောက်မတွန့်နေဘဲ ရိုးသားစွာ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် ဇာတ်လမ်းကျဉ်းကျဉ်းထဲမှာ ရအောင်ပုံဖော်ပြသွားပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးမင်းသားကို ဒီလိုဇာတ်လမ်းကောင်းမျိုးမှာ တွေ့ရတာ ကျွန်တော်အတွက်တော့ အချိုပေါ်သကာလောင်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားလို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။ IMDb Rating (7.3/10) ရရှိထားပြီး မကြည့်ဖူးတွေကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ (ဒီဇာတ်ကားရဲ့ မြန်မာစာတန်းထိုးကို ကျွန်တော်ဂျီကျလို့ ကို Thae Htoo ...
IMDB: 7.3/10 325,676 votes
The Machinist (2004) The Machinist(2004) IMDB….7.7/10,,,,,Rotten…77%ဒီကားက ကွညျ့ဖူးတဲ့သူတိုငျးညှနျးဆိုကွသလို မဖွဈမနကွေညျ့သငျ့တဲ့ကားရယျလို့ သတျမှတျထားကွတယျ....ဒီကားက အံသွမငျသကျစရာတှမြေားလှတယျ…..insomniaရောဂါသညျတဈယောကျအဖွဈ Baleကသရုပျဆောငျထားတယျ….ဒီရောဂါက ညဖကျအိပျမပြျောတဲ့ရောဂါ…သူ့ရဲ့ဆိုးကြိုးကတော့ အငျအားခြိနဲ့ပွီး ပိနျလှီလာစတောပဲ.…ကြှနျတော့အထငျပွောရရငျ ဒီကားရဲ့ အဓိက ကြောရိုးလိုဖွဈနတေဲ့ bodyပိုငျးကို အဓိကပွငျဆငျခဲ့ပုံပျေါတယျ….ဒီလိုပိနျဖို့ baleဟာ နစေ့ဉျလုပျနကြေ gym ကိုလုံးဝရပျတနျ့လိုကျပွီး အစားအစာ အဟာရလုံဝလြော့ခလြိုကျတယျ...သူ့ရဲ့မူလ ၁၇၄ပေါငျကို ပေါငျ ၆၀ထိခပြွီး insomniaရောဂါသညျနဲ့တူအောငျလုပျလိုကျတယျ...Body Transformation အကွီးကယျြဆုံး top 10 ထဲမှာတောငျပါတယျ…သူ့ရဲ့ပွငျဆငျမှုက ကွောကျစရာကောငျးလှတယျ...နိုငျငံတဈကာရုပျရှငျဆု ၇ဆုတောငျရရှိထားပါတယျ….ဒီကားကမကွညျ့ရသေးသညျ့တိုငျအောငျ တျောတျောမြားမြားရငျးနှီးကွပါတယျ….. ဇာတျလမျးနဲ့ပတျသကျပွီးမပွောတာအကောငျးဆုံးဖွဈမယျလို့ ယူဆထားလို့ ကြှနျတျောမပွောတော့ပါဘူး…. ဒီကားဟာ ပေးခငျြတဲ့ Message က အရမျးကိုကောငျးပါတယျ…ပေးခငျြတဲ့ message အရမျးကောငျးတာကို ဘယျလောကျတောငျကောငျးလဲ ဘာကွောငျ့ကောငျးလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျောမပွောပွတတျတဲ့အတှကျ ခှငျ့လှတျပေးပါလို့….ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျသူကတော့ ကို Sherlock ဖွဈပါတယျ….. ဒီကားက ကြည့်ဖူးတဲ့သူတိုင်းညွှန်းဆိုကြသလို မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ကားရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြတယ်....ဒီကားက အံသြမင်သက်စရာတွေများလှတယ်…..insomniaရောဂါသည်တစ်ယောက်အဖြစ် Baleကသရုပ်ဆောင်ထားတယ်….ဒီရောဂါက ညဖက်အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ…သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးကတော့ အင်အားချိနဲ့ပြီး ပိန်လှီလာစေတာပဲ.…ကျွန်တော့အထင်ပြောရရင် ဒီကားရဲ့ အဓိက ကျောရိုးလိုဖြစ်နေတဲ့ bodyပိုင်းကို အဓိကပြင်ဆင်ခဲ့ပုံပေါ်တယ်….ဒီလိုပိန်ဖို့ baleဟာ နေ့စဉ်လုပ်နေကျ gym ကိုလုံးဝရပ်တန့်လိုက်ပြီး အစားအစာ ...
IMDB: 7.7/10 347,041 votes
Agent Cody Banks 2: Destination London (2004) Agent Cody Banks 2: Destination London ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှဈ​က ဆကျ​လကျ​ထှကျ​ရှိတဲ့ ဇာတျ​ကားတဈ​ကားပါဒီဇာတျ​ကားမှာ​တော့ ကိုဒီတဈ​​ယောကျ​ သံစုံတီးဝိုငျး​ကြောငျးသားအဖွဈ​ဟနျ​​ဆောငျ​ရငျး လနျ​ဒနျ​မှာ စုံစမျး​ရေးတာဝနျ​ထမျး​ဆောငျ​ရမှာဖွဈ​ပါတယျ​....တာဝနျ​က​တော့ လြှို့ဝှကျ​လကျ​နကျ​တဈ​ခုဖွဈ​တဲ့ စိတျ​ထိနျးခြုပျ​ကိရိယာကို တားဆီးရမှာဖွဈ​ပါတယျ​.....တာဝနျ​ထမျး​ဆောငျ​ရငျး MI6​အေးဂငျြ့​ဖွဈ​သူ အတနျး​ဖျော​သူငယျ​ခငျြး Emily နဲ့အတူပူး​ပေါငျးပွီးလှုပျ​ရှားဖို့အ​ကွောငျးဖနျ​လာခဲ့ပါတယျ​.....သူဘယျ​လိုအခကျ​အခဲ​တှကွေုံဦးမှာလဲ....တာဝနျ​ကို​အောငျ​မွငျ​​အောငျ​ထမျး​ဆောငျ​နိုငျ​မလားဆိုတာ ​ကွညျ့​ရှုခံစားလိုကျ​ဦး​နျော​.....File Size : (950 MB) and (330 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 40min Format : Mp4 Genre :Action, Adventure, Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 1080p BluRay x264-Yify Translated by Myat Noe Wutt Yi Encoded by Thanhtike ...
Sky Captain and the World of Tomorrow (2004) Sky Captain and The World of Tommorrow ဇာတ်​ကားဟာ 2004 ခုနှစ်​ကထွက်​ရှိထားတဲ့ စိတ်​ကူးယဉ်​သိပ္ပံဇာတ်​ကား​လေးဖြစ်​ပါတယ်​Imdb rating အ​နေနဲ့ 6.1/10 ထိရရှိထားပြီး rotten tomatoes 71% ထိရရှိထားပါတယ်​သရုပ်​​ဆောင်​​တွေက​တော့ နာမည်​ကြီး​တွေဖြစ်​တဲ့ Jude Law,Angelina Jolie,Gwyneth Paltrow တို့ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း​လေးက​တွော့းပညာ​တွေတိုးတက်​​ခေတ်​မီ​နေတဲ့ 1939 ခုနှစ်​မှာ သိပ္ပံပညာရှင်​တစ်​ဦးဖြစ်​သူ ​ဒေါက်​တာ Vargas တစ်​​ယောက်​ အ​ရေးကြီးပစ္စည်းတစ်​ခုပို့​ဆောင်​ရင်း ​ရုတ်​တရက်​​ပျောက်​ဆုံးသွားပါတယ်​ဤဖြစ်​ရပ်​နဲ့အလားတူ သိပ္ပံပညာရှင်​ ငါးဦးတိတိ​ပျောက်​ဆုံးမှုကို​လေ့​လာစုံစမ်း​နေတဲ့ သတင်း​ထောက်​မ​လေး Polly Perkins ဟာ စုံစမ်းရင်း ​ဒေါက်​တာ Jennings နဲ့​တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်​ ​တွေ့ဆုံစဉ်​ ​ဒေါက်​တာ Jennings မှ ​ဒေါက်​တာ Tokenkopf ဆိုသူ၏​နောက်​ပစ်​မှတ်​မှာ သူဖြစ်​​ကြောင်း​ပြောခဲ့ပါတယ်​.....ထိုစဉ်​ရုတ်​တရက်​ အစွမ်းထက်​စက်​ရုပ်​များ သူမတို့မြို့ကိုတိုက်​ခိုက်​လာပါ​တော့တယ်​....စက်​ရုပ်​များကိုတန်​ပြန်​တိုက်​ခိုက်​သူ Sky Captain လို့​ခေါ်တဲ့ ...
IMDB: 6.1/10 75,913 votes
Chasing Liberty(2004) ညစာစားနေတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတို့စားပွဲဝိုင်းကို လူရွယ်တစ်စုချဉ်းကပ်သွားတယ် သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က အင်္ကျီအိပ်ထဲကိုလက်နှိုက်လိုက်တယ်....ဒီအပြုအမူကြောင့် သက်တော်စောင့် အယောက် ၂၀လောက်က လူရွယ်တစ်စုကို ခုန်အုပ်လိုက်တယ် ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးရဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ညတစ်ညဟာ သက်တော်စောင့်တွေကြောင့် အကျဉ်းတန်သွားတယ် သက်တော်စောင့်တွေကလည်းသူတို့တာဝန်သူတို့လုပ်ရတာကိုး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ညစာစားတဲ့ကောင်မလေးဟာ သမ္မတရဲ့သမီး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ..ဒါကြောင့် ချဉ်းကပ်သွားတဲ့လူရွယ်တစ်စုဟာ အန္တရယ်ပြုနိုင်သူဖြစ်နိုင်တော့ သူတို့လည်းအခြေအနေအရ တားဆီးလိုက်ရတယ်....ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ phenylethylamine လို့ခေါ်တဲ့ natural chemical တစ်ခုထွက်ပါတယ် သူ့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုနူးညံပျော့ပျောင်းစေတယ် ချစ်တတ်စေတယ် ခံစားတတ်စေတယ် ဒါပေမယ့် phenylethylamine က အချိန်တိုင်းမထွက်ဘူးကာလအပိုင်းအခြားနဲ့ ထွက်တာ....ချစ်သူများနေ့မှာ ချောကလက်ဘာကြောင့်ကျွေးလဲဆိုတော့ ချောကလက်ဟာ phenylethylamine ကိုထွက်စေလို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ကျွေးကြတယ်လို့ပြောကြတယ်....ဒီကားကိုကြည့်ရတာ ကမ္ဘာ့အစွမ်းထက်ဆုံးချောကလက်ကိုစားရသလိုပဲ ..phenylethylamine တွေ ဘယ်လောက်တောင် နှလုံးသားမှာ ပြေးလွှားနေလဲမသိ.ရင်တွေခုန်တယ် ...Plot ကလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် သမ္မတရဲ့သမီးနဲ့အေးဂျင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ့... ဒီကားထဲကကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးပြောတဲ့စကားအတော်များများဟာ ကဗျာရနံတွေထုံလွှမ်းနေတယ်... နောက်ခံသီးချင်းလေးတွေကလည်း လှပလွန်းတယ် တစ်ခါတစ်ရံကိုယ့်ရဲ့ရင်ခုန်သံဟာ ဇာတ်ကားထဲကသီးချင်းရဲ့ ခပ်မှန်မှန်ထွက်နေတဲ့ BASS သံထက်တောင်ကျယ်လောင်နေတတ်တယ်...သေချာတယ် ခင်ဗျားတို့လည်းဒီကားကြည့်နေရင်း ကယောင်ကတမ်းနဲ့ ကိုယ့်ဘယ်ဘက်ရင်အုံကိုပြန်စမ်းမိလိမ့်မယ်.....File Size…(850MB) and (398MB) Quality…DVDrip Format…mp4 Duration…01:50:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…..Phyo ...
IMDB: 6.1/10 32,184 votes
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) Harry, Ron and Hermione return to Hogwarts for another magic-filled year. Harry comes face to face with danger yet again, this time in the form of escaped convict, Sirius Black – and turns to sympathetic Professor Lupin for help. File Size : 1 GB Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 2hr 22min Format : Mp4 Genre : Adventure, Family, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source ...
Eternal Sunshine of the Spotless Mind(2004) Eternal Sunshine of The Spotless Mind IMDb...8.3,,,,Rotten...93 ကျွန်တော်တို့တွေ အရွယ်လေးရ အသိဥာဏ်လေးစဖွံဖြိုးလာတဲ့အချိန်ကစလို့ အနည်းအများ အနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်တွေဆွဲကြတယ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေး အချစ်ရေးတွေပေါ့...တစ်ချို့သောအရာတွေဟာ အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပေမယ့်် အချစ်ရေးမှာတော့ တက်တက် စင်အောင်လွဲမှားမှုတွေရှိတတ်တယ် ဘာလို့ဆို နှလုံးသားက ဦးဏှောက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိလို့ပါပဲ အချစ်စိတ်ကြောင့်မလုပ်နိုင်ဘူးထင်တာတွေလုပ်ရဲလာတယ် မကြောက်သင့်တာတွေကိုကြောက်တတ်လာတယ်....ချစ်သူ ၂ ဦးအဖို့ မွေးဖွားရာပတ်ဝန်းကျင်မတူ ရပ်တည်ပုံချင်းမတူဆိုတော့ ရေရှည်မှာ အထိုက်အလျှောက် အယူအဆတွေလွဲမှားလာကြတတ်တယ်.....ဒီလိုအချိန်မှာ နားလည်မှုဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာပျောက်ဆုံးနေတတ်တယ်... သိပ်ချစ်ပေမယ့် လမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့အခါမှာ သူနဲ့ပတ်သက်သမျှအတိတ်ကအမှတ်တရတွေအားလုံးကိုမေ့ပစ်ချင်ကြတယ် ဒီကားထဲက Joel နဲ့ Clementine ဆိုတဲ့ စုံတွဲလေးက ချစ်စအချိန်မှာတော့ ပျော်ရွှင်စရာတွေပြည့်နှက်နေပေမယ့် အချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ ပြသနာသေးသေးလေးတွေ အဖုအထစ်လေးတွေ ကြုံလာရပါတော့တယ်။ အဲ့လိုအချိန်မှာ အေးအေးေ ဆးဆေးသမား စကားနည်းတဲ့ Joel နဲ့ စိတ်မြန်လက်မြန် Clementine တို့နှစ်ယောက် ဝေးကွာသွားခဲ့ပြီး ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို ကိုယ့်မှတ်ဉာဏ်တွေထဲကအပြီးထုတ်ပစ်ဖို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကြိုးစားလာပါတော့တယ်..မှတ်ဥာဏ်ဖျက်ပေးတဲ့သိပံပညာရှင်ဆီမှာအကူအညီတောင်းတယ်. မှတ်ဉာဏ်တွေ ဖျက်ပစ်တဲ့အခါ ဝမ်းနည်းစရာ၊ ပြသနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေအပြင် ပျော်ရွှင်ရယ်မောခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပါ ဖျက်ဆီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Joel တစ်ယောက် ...
IMDB: 8.3/10 742,597 votes
Shaun of the Dead (2004) Shaun of the Dead (2004) IMDb - 7.9/10_____Rotten - 92% ဒီကားက ဇှနျဘီဇာတျကားကွိုကျသူတှအေတှကျတော့ အကိုကျပဲဖွဈစမှောပါ ဟာသဇာတျမွူးဇှနျဘီကားပါ IMDb 7.9 ရရှိထားတဲ့ ကားကောငျးဖွဈပါတယျ ဒီဇာတျကားလေးကတော့ ရှောငျဆိုတဲ့ အသကျသုံးဆယျကြျော အရှုံးသမားတဈယောကျဟာသူ့အခဈြဆုံးသူငယျခငျြး ငကွောငျ အတျဒျနဲ့ အတူနထေိုငျပါတယျ။ သူ့မှာ ကွှားစရာဆိုလို့ သူ့ရညျးစား လဈဇျပဲရှိပါတယျ။ တဈနမှေ့ာ ဇှနျဘီတှေ ပျေါလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ရှောငျတို့ အသကျရှငျလှတျမွောကျနိုငျမှာလား? ဇှနျဘီတှရေဲ့အစားခံရမှာလား? ဘယျလိုတှေ ဟာသမွောကျအောငျ ရိုကျထားမလဲ? စိတျဝငျစားဖှယျရိုကျထားမလဲ? ဒီကားက ဇွန်ဘီဇာတ်ကားကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ အကိုက်ပဲဖြစ်စေမှာပါ ဟာသဇာတ်မြူးဇွန်ဘီကားပါ IMDb 7.9 ရရှိထားတဲ့ ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ရှောင်ဆိုတဲ့ အသက်သုံးဆယ်ကျော် အရှုံးသမားတစ်ယောက်ဟာသူ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ငကြောင် အတ်ဒ်နဲ့ အတူနေထိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ ကြွားစရာဆိုလို့ သူ့ရည်းစား လစ်ဇ်ပဲရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဇွန်ဘီတွေ ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရှောင်တို့ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်နိုင်မှာလား? ဇွန်ဘီတွေရဲ့အစားခံရမှာလား? ဘယ်လိုတွေ ဟာသမြောက်အောင် ရိုက်ထားမလဲ? စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ထားမလဲ? File Size : (700 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 39min Format : Mp4 Genre ...
IMDB: 7.9/10 509,366 votes
Troy (2004) Troy (2004) IMDb - 7.2/10_____Rotten - 54% Troy (2004)Troy ရုပျရှငျဟု ဆိုလိုကျတာနှငျ့ ဂရိဘကျမှ မွငျးရုပျကွီးအား ထရိုဂနျြစဈသားမြားက ကွိုးမြားဖွငျ့ခညျြနှောငျကာ အီလီယှနျ(Iliad)မွို့ထဲကို သယျဆောငျသှားတဲ့အကွောငျးတှကေို ကွားဘူးနားဝရှိကွပါလိမျ့မညျ။ထငျရှားကြျောကွားသော စဈပှဲတှေ အကွောငျးကို ညှနျးဆိုပွောဆိုကွမညျဆိုလြှငျလညျး ထရိုဂနျြစဈပှဲအကွောငျးကို ခနျြထား၍ ရမညျမထငျပေ။ကမ်ဘာ့အစောဆုံးဂန်တဝငျ စာပေ လကျရာတဈခုအဖွဈ သမုတျထားကွသညျ့ ဂရိစာဆိုတျောကွီး ဟိုးမား၏ အိလီယကျနှငျ့ အိုဒကျဆီ ကဗြာရှညျနှဈပုဒျအနကျ အီလီယကျကဗြာမှာ ဂရိလူမြိုးတို့ ၏ ထရှို ငျမွို့အောငျပှဲအကွောငျးကို ပွနျပွောငျးဂုဏျပွု စိမျ့သောငှာ ဂုဏျတငျရေးဖှဲ့ထားသညျ့ကဗြာရှညျတဈပုဒျဟု ပွောဆို၍ ရနိုငျပါမညျ။ထရိုဂနျြစဈပှဲကို အောငျနိုငျဖို့ရာအတှကျလညျး ဂရိနိုငျငံနှငျ့ ထရှို ငျမွို့နိုငျငံတို့ ကိုးနှဈကြျောကွာအောငျ တိုကျခိုကျခဲ့ရသညျ။ လူသားတှသောမကပဲ နတျဘုရားတှကေပါ ကူညီတိုကျခိုကျကွသညျ။စဈပှဲဖွဈပှားရပုံကနဦးအကွောငျးရငျးကို ဖောကျသညျခရြလြှငျ ထရှိငျဘုရငျသားတျောငယျ ပဲရဈက ဂရိဘုရငျကွီးအကျဂါမနျမနှငျ၏ ညီ မကျနယျလော့ မိဖုရား ဟယျလငျအား ခိုးယူသှားပုံကနေ စတငျခွငျးဖွဈသညျ။ ထရှို ငျနိုငျငံအား ...
IMDB: 7.2/10 478,948 votes
Before Sunset (2004) Vienna ကို ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ရထားတစ်စင်းပေါ်မှာ အသက်အရွယ်အနည်းငယ်ကြီးရင့်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ German စုံတွဲတစ်တွဲ စကားများနေကြတယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာကို အခြေခံပြီး စကားများနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မသိ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတော့ ဖြစ်ဟန်တူတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ အငြင်းအခုန်ပွဲဟာ ရထားတွဲအတွင်းက တစ်ခြားခရီးသည်တွေကိုပါ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လည်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေတဲ့ ပြင်သစ်သူ Celine ဆိုတဲ့ မိန်းမငယ်လေးဟာ ရထားတွဲရဲ့ အနောက်နားက ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ထိုင်ခုံတစ်နေရာကို ပြောင်းထိုင်လိုက်တယ်။ ဒီမှာတင် မလှမ်းမကမ်းနားမှာ သူမလိုပဲ စာအုပ်ထိုင်ဖတ်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က သူမကို လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ စောစောက လင်မယား ဘာကိစ္စနဲ့စကားတွေများနေကြတာလဲ ဆိုပြီး … .အချိန်ကာလအားဖြင့် 18 နှစ်ကျော်ကြာမြင့် သွားတဲ့အခါ Greece ရဲ့ ဟိုတယ်အခန်းကျဉ်းလေးတစ်ခုထဲမှာ လင်မယားနှစ်ယောက် စကားအခြေအတင် ငြင်းခုန်နေကြတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး မြိုသိပ်ထားခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ...
IMDB: 8.0/10 181,350 votes
Saw 1 to7(Collection) Obsessed with teaching his victims the value of life,aderanged, sadistic serial killer abducts the morally wayward. Once captured, they must face impossible choices inahorrific game of survival. The victims must fight to win their lives back, or die trying...သူ့နာမည်က ဂျွန် ခရမ်မာ ။သူ့ကို ရဲတွေနဲ့ သတင်းစာတွေက Jigsaw လို့ ခေါ်တယ် ။ ဂျစ်ဆော ဆိုတာ ဥာဏ်စမ်း ရုပ်ဆက် ကစားနည်း တစ်ခု ။ ...
IMDB: 7.7/10 317,135 votes
Saw 1 to7(Collection)
[18+] The Japanese Wife Next Door (2004) WARNING: Contain nudity and Strong Sexual Content, this movie may not be suitable for some viewers.Title: The Japanese Wife Next Door Year:2004 Directed: Yutaka Ikejima Genre: Erotic Comedy Runtime: 1h 0mn Country: Japan Language: JapaneseCast : Reiko Yamaguchi, Naohiro Hirakawa, Kikujiro Honda, and Akane YazakiSynopsis/Plot (from Pink Eiga)A businessman's life is almost complete; all he needs isawife. He meets two prospective womenâ€¦ But ends ...
IMDB: 5.2/10 1,100 votes
[18+] The Japanese Wife Next Door (2004)